I-Big switch neBluelock | Martech Zone
I-Big switch neBluelock
NgoMgqibelo, Disemba 22, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Emasontweni ambalwa edlule ngiqale ukufunda iThe Big switch by UNicholas Carr. Nayi ingcaphuno evela kusayithi efile:
Eminyakeni eyikhulu eyedlule, izinkampani zayeka ukukhiqiza amandla azo ngezinjini ze-steam kanye nama-dynamos futhi zaxhuma kugridi kagesi osanda kwakhiwa. Amandla ashibhile akhishwe yizinsiza zikagesi akagcinanga ngokushintsha ukuthi amabhizinisi asebenza kanjani. Kusungule ukuphendulwa kochungechunge kwezinguquko kwezomnotho nezenhlalo ezaletha umhlaba wanamuhla. Namuhla, inguquko efanayo iyaqhubeka. Kuxhunywe kugridi yekhompyutha yomhlaba jikelele, izikhungo ezinkulu zokucutshungulwa kolwazi seziqalile ukudonsa idatha nekhodi yesoftware emakhaya nasemabhizinisini ethu. Okwamanje, yikhompiyutha ephenduka isisetshenziswa.
Ukushintshwa sekuvele kwenza umkhakha wamakhompiyutha, kuletha izimbangi ezintsha ezifana neGoogle ne-Salesforce.com phambili nokusongela osomabhizinisi abanjengoMicrosoft noDell. Kepha imiphumela izofinyelela kude kakhulu. Ukusetshenziswa kwekhompyutha okushibhile okusetshenzelwa ekugcineni kuzoshintsha umphakathi njengoba kwenza ugesi oshibhile. Sesiyibonile imiphumela yokuqala? ekushintsheni kokulawula imidiya kusuka ezikhungweni kuya kubantu, ezingxoxweni ngokubaluleka kobumfihlo, ekuthunyelweni kwemisebenzi yabasebenzi bolwazi, noma nasekukhuleni komnotho. Njengoba izinsiza zolwazi zikhula, izinguquko zizokwanda kuphela, futhi ijubane lazo lizoshesha kuphela.
IBig switch isivele iyiqiniso. NgoJanuwari, I-Patronpath ihambisa ingqalasizinda yethu yokukhiqiza IBluelock. Umhlaba omusha (njengoba isikhangiso sisho kubha eseceleni).
Kungukuncoma okuphelele kweSoftware njengesevisi (Saas). Izinkampani ze-SaaS engizisebenzele zihlale zinika izikali kwi-hardware kanye namaqembu abantu abazowasekela. IBluelock yisixazululo esifanele thina ngoba singakhulisa ibhizinisi lethu ngaphandle kokukhathazeka ngengqalasizinda yethu noma ngezinsizakusebenza ezinkulu ezihambisana nalo. Kukhipha okhathazayo!
Ingqalasizinda njengesevisi (IaaS) imodeli yebhizinisi evelayo ekuvumela ukuthi uthenge izinsiza ze-IT kumhlinzeki we-IaaS njengezindleko ezingaguquki njalo ngenyanga. Nge-IaaS, esikhundleni sokuthenga inqwaba yamaseva ne-SAN, ungaqasha ama-cores processor angamashumi ayisithupha, ama-terabyte amabili okugcina kanye nama-gigabyte ayisithupha enkumbulo bese uwakhokhela njalo ngenyanga noma ngekota. Le ndawo yilokho kanye uNicholas akhuluma ngakho encwadini yakhe. Sithenga umkhawulokudonsa, isikhala sediski namandla okucubungula njengokungathi sithenga enye insiza.
Abathengisi abaningi be-IaaS bayagijima I-VMWare noma uhlelo lokusebenza olufanayo kunokunika amandla ukubonwa. Le ndlela yokusebenza kwesistimu iyisihluthulelo sokubeka isifuba phakathi kwehardware nemvelo yakho evumela ukuthi ikhule, ihambe, iphindaphindwe, njll. Futhi yikhona okwenza umhlinzeki we-IaaS ahluke kumhlinzeki wesevisi wendabuko noma isikhungo sokubamba.
Senza iBig switch ekupheleni kukaJanuwari. Thatha ikhophi yencwadi bese ushayela uBluelock ucingo.
I-PS: Lokhu AKUKHO okuthunyelwe okuxhasiwe… into nje ebengifuna ukuyaba ngoba ngijabule kakhulu ngalokhu kuthutha!
Tags: umgomoumliloihora 1981kim dotcomukulandai-napsteri-piracypirateipirate bayukweba
Thumela Umlayezo Weholide Kumasosha!
Dec 23, 2007 ku-12: 14 AM
Kepha iBlueLock ibonakala ingumxhasi wesiza…
Nokho, kungani usho iBlueLock ungasho i-EC2 ye-Amazon, i-S3, ne-SimpleDB?
Dec 23, 2007 ku-11: 31 AM
IBluelock ayikhokhi okuthunyelwe noma indawo yomxhasi. Nginikeza abanye babangane bami nozakwethu ukubekwa endaweni enconywayo kwesinye isikhathi. Mhlawumbe kufanele ngiyiqambe ngokuthi "Abangane Nabaxhasi".
IBluelock nayo ilapha e-Indiana - uzobona ukuthi ngizama ukusiza ngezinkampani zokuqala nezinkampani zobuchwepheshe zase-Indiana.
Insizakalo ye-Amazon akuyona ingqalasizinda njengesevisi, zingamasevisi wewebhu. Umehluko ukuthi imvelo yami ayidonsi 'efwini' (igama le-Amazon) lapho imvelo yami yabelwa khona amakhulu noma izinkulungwane zabanye.
Nge-Bluelock sizoba namaseva azinikele, isikhala sediski, ama-processor kanye ne-bandwidth. Sisendaweni ebonakalayo - ngakho-ke singakwazi ukuphindaphinda imvelo yethu lapho kudingeka.
Siqinisekise i-SLA's, i-Industry Standard Security Compliance, i-firewalls, ukutholwa kwe-intrusion, ukufinyelela kwe-console, ukuqapha nokuxhaswa kwe-24/7, izipele ezihlanganisiwe, amandla angasebenzi… uyiqamba igama.
Ngiyethemba lokho kuyasiza! Bheka IBluelock Ngolwazi olwengeziwe.
Dec 23, 2007 ngo-12: 05 PM
Ngemuva kokubuyekeza kwakho okukhazimulayo, mhlawumbe iBlueLock kufanele ibe ngumxhasi okhokhelayo…
@Douglas: Ukusiza i-Indiana
Ngiyaqonda, ngenza okufanayo e-Atlanta, GA (bheka http://web.meetup.com/32/)
@Douglas: I-Amazon akuyona insizakalo yengqalasizinda
Noma ingekho ezingeni elifanayo leBlueLock ngokusobala, kepha ngabe i-EC2 akuyona ingqalasizinda?
Dec 23, 2007 ku-11: 20 AM
@Mike Kukhona ukuhlangana phakathi kokunikezwa kwe-Amazon EC2 / S3 / SimpleDB neBlueLock. Kepha uma kukhulunywa nje, ziyizixazululo ezihluke kakhulu, futhi zikhomba izethameli ezahlukahlukene.
Awukwazanga ukusetha iqoqo lama-Amazon ngaphandle kwenani elifanelekile lobuchwepheshe, futhi uzodinga ukwakha okuthile ukuphatha izimo ezahlukahlukene ze-EC2. Ubuye ungene ezinkingeni eziningi ezizodinga ukusingathwa kuhlelo lokusebenza, njengeqiniso lokuthi izimo ze-EC2 azinawo ama-IP static, ukuthi asikho isitoreji sendawo esimweni se-EC2, leso sitoreji se-S3 sihamba kancane kuneSAN noma disk yendawo, nokuthi i-SimpleDB ayemukeli imibuzo ye-SQL noma ivumele ukujoyina okuyinkimbinkimbi. I-EC2 ne-SimpleDB zisese-beta njengamanje (neyokugcina kuyi-beta yangasese), ngakho-ke awekho ama-SLAs - hhayi into ongathanda ukuyifaka ebhizinisini lakho elibucayi.
I-BlueLock ngokuyisisekelo ikunikeza ukufaka endaweni okungena kuyo i-rack ye-Windows kanye / noma amaseva we-Linux ngaphandle kwamakhanda okuphatha, noma ukuvuselela uhlelo lwakho lokusebenza ukuze lubanjwe e-Amazon. Uthola nokukhuluma nonjiniyela abasizayo ocingweni.
Lokho kusho ukuthi, i-Amazon ibiza kancane kakhulu ukuqala ngayo, futhi iBlueLock kungenzeka ingabizi kahle uma usebenzisa amaseva ambalwa kuphela. Kubuye kukhokhwe njengokusebenzisa kwakho, kanti amanani weBlueLock afana nezikhungo zedatha yendabuko lapho uhlela khona uhlelo lokukhokha inani elithile le-cpu / disk / bandwidth / njll noma ngabe uyisebenzisa noma cha ngenyanga.
Ukuzikhulula: Ngiyazi abantu abambalwa abasebenza eBlueLock. Kepha ngisebenzisa i-Amazon S3 ngenkuthalo ekukhiqizeni, ngingumlandeli omkhulu we-EC2 (ezimweni ezifanele), futhi ngilinde ngokulangazela isimemo sami se-SimpleDB esizimele se-beta.
Dec 23, 2007 ngo-12: 08 PM
Siyabonga ngemibono u-Ade. Bengizocela uDouglas ukuthi abhale iposi ngokuqhathanisa nokuqhathanisa iBlueLock nezinsiza zewebhu zeAmazon kepha asikho isidingo manje njengoba ubuvele wenza!
I-PS Nina baseNdiya niyanamathela ngempela, doncha? 🙂
Dec 23, 2007 ngo-12: 21 PM
Ha! Yebo siyakwenza, Mike!
Ngenye yalezo zifunda ezincane ngokwanele ukuthi kunezigaba ezimbalwa kakhulu zokwehlukanisa phakathi kwezinkampani ezi-2 noma abantu. Sizama kanzima ukuqinisa lobu budlelwano nokuhlela esifundeni futhi.
Kuyisifunda esifanele ukuqala inkampani yezobuchwepheshe ngoba izindleko zokuphila nezinzuzo zentela zihle kakhulu. Uma kuqhathaniswa kuzwelonke, kungama-20% izindleko eziphansi ngokwesilinganiso. Yilelo gama esidinga ukuphuma ngalo! Isimo sengqondo seMidWest ngokusebenza kanzima kanye nensizakalo enhle nawo umehluko omkhulu.
Encane i-Indiana iyinethiwekhi yokuxhumana entsha eseqalile ukuhlela kangcono amabhizinisi esifundeni.
PS: Ngijabule kakhulu ukuthi u-Ade ungenile. Sesithuthela eBluelock ngakho-ke akumele ngazi wonke umehluko 😉
Dec 23, 2007 ngo-12: 42 PM
@Douglass: Isifunda esifanele ukuqala inkampani yezobuchwepheshe ngoba izindleko zokuphila nezinzuzo zentela zihle kakhulu. Uma kuqhathaniswa kuzwelonke, kubiza izindleko ezingaphansi ngama-20% ngokwesilinganiso. Yilelo igama esilidingayo ukuphuma! Isimo sengqondo seMidWest ngokusebenza kanzima kanye nensizakalo enhle nawo umehluko omkhulu.
Kepha-ke kufanele uhlale kuwo Indiana unqatshelwe…. (uxolo, angikwazi ukumelana '-)
Nokho, kuzwakala sengathi kufanele uyobiza iChamber of Commerce njengomxhasi wakho olandelayo…
Dec 23, 2007 ngo-1: 55 PM
Siyabonga ngekhompyutha njengesimo sosizo. Kunengqondo kakhulu futhi ngokushesha kubeka i-IaaS embonweni. Ngiyakwazisa okuthunyelwe nangokuphathwa okukhethekile kweBluelock :).
Okuthunyelwe okuhle uDoug.
Amaholide amahle kubo bonke.